Nyamavhuvhu 14, 2018 arun
Bitcoin runopfuura Gold mu ugari vhoriyamu
A tsime anoremekedzwa cryptocurrency mutsvakurudzi, Nikodhimo Carter, akati Bitcoin rakapfuura racho OTC goridhe pamusika ugari Mavhoriyamu, kunyange pakati munhu 70% inodonha mu mutengo wayo. Maererano kundoongororwa nokuongorora kwakaitwa London confirm pamusika yose nendarama pamusoro-the-yemabhuku (OTC) musika ari njanji agadzirise $446 mabhiriyoni 2018, wakati kugadziriswa zvishoma pane $30 bhiriyoni uri pamwedzi hwaro kubva January. Mukupesana ne, inobva nemashoko Coin Metrics, mumwe cryptocurrency musika Data Provider zvakataurwa Carter, ari Bitcoin musika yakatobuda kupatsanurwa $848 bhiriyoni gore rino uye uri njanji ipfuure $1.38 tiririyoni nokuda pakupera kwegore.
Sezvo LBMA nhoroondo kweinenge 70% of yose nendarama OTC vhorumu, pa $848 bhiriyoni, Bitcoin akatovaregerera akagadzirisa kukosha kare 8 mwedzi kupfuura zvakafanotaurwa kugarwa vhoriyamu yose musika yegoridhe 2018. Kuenderana mu bhuku ndarama OTC pamusika uye bhuku Bitcoin kunoratidza choruzhinji akatanga kubvuma uye vave Bitcoin somunhu Premier chitoro chinokosha uye svikiro zvokutsinhanisa, nokuda kwayo unoshamisa zvakanakira pamusoro goridhe, akadai fungibility, liquidity, uye transportability.
Conservatively, (akagadziridzwa inofungidzirwa), Bitcoin akaita akagadzikana $ 848b gore rino, uye ari pamusoro njanji kugadzirisa $ 1.38T. Bitcoin, zvinoratidzika, ave chinyararire Munopfuura OTC goridhe pamusika ugari Mavhoriyamu.
— picnic Carter (@nic__carter) Nyamavhuvhu 12, 2018
Jamaica Stock Exchange kuti vomurova crypto twa wokutengesera
The Jamaica Stock Exchange anoronga kupa cryptocurrencies sezvo tradeable yesangano kuti vatengi. Canadian FinTech startup Blockstation kushanda pamwe JSE nokuda kwezvisikwa itsva digitaalinen zvinhu zvokutengeserana papuratifomu, kuchikuva unoiswa kuenda kurarama pakazopera gore. JSE yamaneja Marlene Street Forrest akati “Mugumo mutambo pakupera zuva riri kutengesa zviratidzo, kuguma mutambo uri kunyanyochena vokukurukura, mugumo mutambo ndiko kupa kuti nzvimbo kumusika kuti vangada chigadzirwa ichi, kutanga kuita kudaro wakachengeteka nenzira.”
Blockstation co-muvambi uye mukuru zvebhizimisi mapurani Jai waterman the vakati startup yave kushanda pamwe JSE kuva tsika shanduro yaro papuratifomu nokuda Exchange. Dzinenge zvikumbiro kubva JSE kunge zvaisanganisira nematurusi chamber kumusika bata uye zvimwe pamutemo zvinodiwa, iye akacherechedza. “Basa redu kupa ... nzira yakachengeteka zviri kutengesa cryptocurrencies pamwe bhuroka-navatengesi Nehunde exchanges, Tiri kupa Stock Exchange mabikirwo kuti bhuroka-munyengeri Network uye dzigare mairi, zvokuti kubvira kumugumo-to-mugumo, hwavo kutenderera upenyu kutengesa - chete kufanana ne kuchengetedzeka - vanogona kuita chaiwo chetezvo pamwe blockchain uye cryptocurrencies.”
Square Cash anovhura Bitcoin kutenga & kutengesa ose 50 inoti
mavhiki isingasviki miviri pashure kugoverana Square kuti cryptocurrency mari yakanga nekaviri Q2 2018, ari kubhadhara kambani akazivisa, inoshanda pakarepo, vanozvishandisa zvino anogona kushandisa Cash App kutenga Bitcoin vose makumi mashanu inoti. Kuwanikwa vose makumi mashanu inoti nzvimbo Square kuti Cash App kukwikwidzana zvakawanda zvakananga Coinbase, anotungamirira mutengi chikumbiro kuti cryptocurrency kutenga muUnited States.
Coinbase anoti zvakaita basa kupfuura $150 bhiriyoni cryptocurrencies kubva kanda raro 2012, generating kupfuura $1 mabhiriyoni kwemari munyika 2017 kubva kushumwa 20 miriyoni vanozvishandisa vakanyorwa. Pamugumo 2017, Square yakashuma kupfuura 7 miriyoni pamwedzi vanoshingaira vanoshandisa, vazhinji akabatana kuti kuda kufanana-kuti-vezera USD nokutumira basa.
Tsvuku, chena, uye bitcoin. Zvino unogona kushandisa Cash App kutenga bitcoin mune zvose 50 inoti. pic.twitter.com/D4fhVRz7WL
— Cash App (@CashApp) Nyamavhuvhu 13, 2018
Kraken Daily Market Mushumo 13.08.2018